Chii Chingaita Kuti Vari Muwanano Vafare? | Mibvunzo yeBhaibheri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Maltese Maya Mazatec (Huautla) Mixe (North Central) Mizo Moore Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ngabere Norwegian Nzema Ossetian Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uruund Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Chii chingaita kuti vari muwanano vafare?
Mazano eBhaibheri panyaya yokuva newanano inofadza anobatsira nokuti rinobva kuna Jehovha Mwari anova ndiye akatanga wanano. Rinotidzidzisa kuva neunhu hunoita kuti wanano inakidze uye rinotinyevera nezveunhu hunoparadza wanano. Rinotidzidzisawo kuti tigone kukurukurirana zvakanaka zvoita kuti tiwedzere kufara muwanano.—Verenga VaKorose 3:8-10, 12-14.
Varume nemadzimai vanofanira kukudzana uye kuremekedzana. Vanogona kufara kana vakabvuma zvavanonzi naMwari vaite muwanano.—Verenga VaKorose 3:18, 19.
Chii chinoita kuti vari muwanano vachembedzane?
Vari muwanano vanogona kugara vose kana vachidanana. Mwari anotidzidzisa maratidzire atingaita rudo. Jehovha neMwanakomana wake Jesu, mienzaniso yakanaka yerudo rwokuzvipira.—Verenga 1 Johani 4:7, 8, 19.
Kana varume nemadzimai vakaremekedza urongwa uhwu hwewanano, vanogarisana zvakanaka. Mwari akaita kuti wanano ive mubatanidzwa unogara zvachose pakati pemurume nemukadzi kuitira kuti mhuri dzive dzakachengeteka. Izvi zvinokwanisika nokuti Mwari akasika murume nomudzimai kuti vagarisane uye vabatsirane. Akavasikawo nomufananidzo wake, vachikwanisa kutevedzera rudo rwake.—Verenga Genesisi 1:27; 2:18, 24.